အင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင် ဘယ်လောက်အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီလဲ?
မေးခွန်းအားလုံးကို [ မှန်သည် / ဟုတ်ပါသည်] သို့မဟုတ် [ မှားသည် /မဟုတ်ပါ ] ဟုဖြေဆိုပါ။ သင်အဖြေများကို စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ပါ။ မေးခွန်းများ အောက်နားတွင် အဖြေမှန်ကို ရှာဖွေပါ။
မေးခွန်း (၁) တစ်ဦးတစ်ယောက်က ကျွန်ုပ်အကြောင်း ရယ်စရာလှောင်ပြောင်သည့် အကြောင်းအရာများကို လူမှုရေကွန်ယက်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်။ သူ့ကိုပြန်ပြီး တိုက်ခိုက်ဖို့ သဘောတူပါသလား ? အဖြေ [ တူပါသည် ] သို့မဟုတ် [ မတူပါ ]
မေးခွန်း(၂) ကျွန်ုပ်သည် သူငယ်ချင်း၏ အကောင့်(account) ထဲဝင်၍ သူငယ်ချင်း၏ မက်ဆေ့များများကို ၂-မိနစ်ခန့် ဖွင့်ကြည့်မိသည်။ အဲဒါ လုပ်သင့်ပါရဲ့လား? အဖြေ [ တူပါသည် ] သို့မဟုတ် [မတူပါ ]
မေးခွန်း(၃) တစ်ဦးတစ်ယောက်က မသင့်တော်သည့် အကြောင်းအရာများကို လူမှုရေးကွန်ယက်ပေါ်တွင် တင်ထားသည်။ သူတို့ကို တိုင်ကြားဖို့ သဘောတူမှာလား ? အဖြေ [ တူပါသည် ] သို့မဟုတ် [မတူပါ ]
မေးခွန်း(၄) ကျွန်ုပ်သည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပြီး ခုသူ/သူမက သူ/သူမနေထိုင်ရာနေရာသို့ လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်။ အဲဒါ သွားတွေ့ဖို့သင့်တော်ပါရဲ့လား? အဖြေ [ ဟုတ်ကဲ့တူပါသည်] သို့မဟုတ် [ မတူပါ ]
မေးခွန်း(၅) အင်တာနက်ပေါ်တွင် ဆုကြေးငွေပေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စာများသည် လိမ်ညာလှည့်ဖျားခြင်း ဆိုသည်မှာ ဟုတ်ပါသလား ? အဖြေ [ဟုတ်ပါသည်] သို့မဟုတ် [မဟုတ်ပါ]
မေးခွန်း(၆) ကျွန်ုပ်မသိသောသူတစ်ဦးထံမှ ပေးပို့လာသော မက်စေ့စာတစ်စောင်ရရှိသည်။ ယင်းမက်ဆေ့စာထဲတွင် ပါဝင်သော လင့်ခ် (အခြားအင်တာနက်စာမျက်နှာသို့ ချိတ်ဆက်ဖွင့်ပေးသည့်စာတမ်း)ပါရှိသည်။ ဘာအကြောင်းအရာလဲ သိရှိအောင် ယင်း လင့်ခ်အား ဖွင့်သင့်ပါသလား ? အဖြေ [သင့်ပါသည်] သို့မဟုတ် [မသင့်ပါ]
မေးခွန်း(၇) ကျွန်ုပ်၏ လျှို့ဝှက်စကားလုံးကို ကျွန်ုပ်၏ အခင်မင်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုပဲ မျှဝေပြောပြထားမယ်ဆို ပြောသင့်ပါသလား? အဖြေ [ပြောသင့်ပါသည်] သို့မဟုတ် [မသင့်ပါ]
မေးခွန်း(၈) အင်တာနက်ပေါ်ရှိ အချက်အလက်များကို ကျောင်းစီမံကိန်းပရောဂျက်အတွက် ပြန်လည်အသုံးချမည်ဆိုပါက သဘောတူပါသလား ? အဖြေ [တူပါသည်] သို့မဟုတ် [မတူပါ]့ထားရှိပါ တွင်ဖတ်ရှုလေ့လာပါ။
သင်ဘယ်လောက်အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ခဲ့သလဲ ? အခုဘဲ အဖြေရှာကြည့်ရအောင်!